Short.io: Aha Uhie URL Shortener | Martech Zone
Ruo oge ụfọdụ, e debara aha m n'ọrụ iji belata URL m, ma ọnụ ahịa nke usoro ahụ dị oke ọnụ. Iji subdomain nkem jiri ego karie na onu ahia ha. N'ezie, m na-akwụ ụgwọ karịa maka akaụntụ URL ha na-ebelata karịa ka a na-ebo m ebubo maka nyiwe ahịa niile.
Enwere m ike iji ụdị nnwere onwe ebe ngalaba ahaghị aha m, mana II chọrọ ka ndị tụkwasịrị obi wee mata URL m na-ekesa… na nke a go.martech.zone. Hapụ ụfọdụ ọnụọgụ URL bụ ọkọlọtọ ọbara ọbara nye ọtụtụ ndị na-eche nche.
O were nkeji ole na ole tupu ị chọta ọtụtụ ngwaọrụ na ntanetị, yana Short.io pụtara ìhè ozugbo. Enwere m ike ịchacha ihe mkpụmkpụ na subdomain m - ọbụlagodi na akaụntụ nnabata ha! Ọ bụghị naanị nke ahụ, ha nwere ụzọ isi na-akwaga na mkpụmkpụ ochie ma ọ bụrụ na ịnweghị ike mbupụ na mbubata data gị… na-akwụghị ụgwọ.
Na Short.io, ịnwere ike ịme ka ọ pụta ìhè na slug ma ọ bụ ịnwere ike ịnwe ya iji nọmba na mgbakwunye onwe gị. Na, ị nwere ike banye ma hazie slug otu ị chọrọ ma ịchọrọ.
Akụkụ bụ isi bụ nsuso Mgbasa Ozi Google Analytics. Greatzọ dị mma iji mee ka URL dị mkpụmkpụ bụ iji belata ogologo ogologo URL ogologo ebe ị tinyekwara eriri ajụjụ UTM gị. Na Short.io, nke a bụ akụkụ niile nke nhọrọ na URL gị dị mkpụmkpụ yana interface dị ọcha dị mma.
N'ikpeazụ, Short.io na-enyekwa a WordPress Nkwụnye iji mee ka njikọ gị dị mkpụmkpụ site na iji API ha. Ezigbo mma!
Tags: bitlyomenala ngalabaGoogle Analyticsgoogle analytics mkpọsa nsuso urlgoogle analytics nsuso urlObidi.cmOberemkpirisiurl shortenerọ bụacha ọcha labeelu